श्रीमानले घर न घाट बनाएपछि श्रीमती रुँदारुँदै अन्तर्वार्ता नै सकियो…. (भिडियो सहित) «
श्रीमानले घर न घाट बनाएपछि श्रीमती रुँदारुँदै अन्तर्वार्ता नै सकियो…. (भिडियो सहित)
Published : 20 January, 2020 10:04 pm
अनलाइन टिभी नेपालले तयार बारेको माया श्रेष्ठको कथा । माया श्रेष्ठ जस्ता दिदिबहिनि गाउ गाउ शहर शहरमा छन् । काठमाडौंमा चल्ने प्राइभेट गाडीको स्टेरिगंमा हेर्यो भने त्यहाँ अधिकांश पुरुषलाई देखिन्छ । स्टेरिगंमा बस्ने महिलाहरु निकै कम हुन्छन् । अहिले भने कताकती महिलाहरु पनि गाडीका स्टेरिगंमा देखिन थालेका छन् । त्यसरी प्राइभेट वा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने एक महिलाको कथा यहाँ हामिले प्रस्तुत गर्न लागेका छौं । उनको नाम हो माया श्रेष्ठ ।
सानदार गाडी चलाएर आएर आफुलाई अहिले अंगालो हाल्दा खुसीको आँशु झर्छ । गाडी सिक्ने अवस्थामा पनि आफुले सहयोग गरेको पल सम्झदै उनले लक्ष्मीले भनिन् बाटोमा गाडी सिक्दा सिक्दै पनि समस्या पर्यो भने म फोनवाटै सम्झाउँथे । अहिले त निकै सिकीसकेको छन् । मिनालाई माया जस्ता थुप्रै महिलालाई अझ सहयोग गर्ने धोको छ । त्यसैले माया जस्ता पीडित महिलाहरुलाई मुस्कान छोडेर हाँस्न आग्रह गरिन् । श्रीमानले धोका दिए भन्दैमा रोएर बस्ने होइन आत्मविश्वास बलियो बनाएर अघि बढ्यो भने सामजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइन्छ । त्यसैले मायाले अन्य महिलाहरुलाई पनि प्रेरणा दिनुपर्छ । मनै रुवाउने भिडियो :